संसदका साक्षी ती कलिला विद्यार्थी र संसद बैठकको जात्रा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
संसदका साक्षी ती कलिला विद्यार्थी र संसद बैठकको जात्रा
दामोदर नेपाल , १४ श्रावण २०७६
संसद प्रजातान्त्रिक देशको सर्वोच्च निकाय हो। सिंगो देश संचालनको विधि र प्रक्रिया निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने निकाय संसद मर्यादित होस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ र हुनु पनि पर्छ। संसदमा कुनै पनि विषयवस्तु एजेण्डाका रुपमा प्रस्तुत हुन्छन्। त्यसका पक्ष र विपक्षमा तर्क वितर्क गरिन्छ बहस हुन्छ। संसदका सदस्यहरुले प्रस्तुत एजेण्डामा आफ्नो तर्फबाट संशोधन पनि प्रस्तुत गर्छन्।
व्यापक छलफल र बहसपछि सही निष्कर्ष निकालिन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइन्छ। यिनै निष्कर्षहरु त्यसपछि कानुन बन्छन् र सिंगो देशमा लागू गराइन्छ। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशमा यही विधि संचालनमा छ र हाम्रो नेपालमा पनि संसदको काम गर्ने विधि यही नै हो।
विधि त छ तर विधि मान्नु पनि त पर्यो। हाम्रो देशमा संसद संचालनको लागि लिखित विधि र प्रक्रिया त छ तर त्यो कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। सोमबार संसदको बैठकमा यस्तै भयो। सोमबार संसदको काम कारवाही हेर्न ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरु आएका थिए। उनीहरु दर्शकदीर्घामा बसेर हेरिरहेका थिए। संसदको बैठक सुरु भयो।
राष्ट्रिय गानपछि सभामुखले संसदको कारवाही अघि बढाए। सभामुखले जब संसदको प्रक्रिया सुरु भएको घोषणा गरे तत्कालै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदहरुले नाराबाजी गर्न थाले। प्रतिपक्षीको माग सर्लाही घटनामा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने थियो। प्रतिपक्षले संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै गर्दा सत्तापक्षले त्यो नमानेपछि सोमबार संसद अवरुद्ध हुने स्थितिको सिर्जना भएको थियो।
प्रतिपक्षीको माग जायज थियो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर प्रतिपक्षले जसरी संसदमा नाराबाजी गरे के त्यो सही विधि थियो त? संसदीय समिति संसदले नै गठन गर्ने हो तर संसद बैठक नै अवरुद्ध भएपछि त्यो समिति कसरी गठन हुन्छ? त्योभन्दा ठूलो कुरा ती कलिला विद्यार्थीका अगाडि यो अराजकता देखाउनु जरुरी थियो? जरुरी भन्दा पनि उचित थियो?
देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अगुवा कांग्रेसबाट प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको यसरी उपहास गरिँदा के कांग्रेसको पुरानो गरिमा कायम रह्यो होला? कांग्रेस इतिहासमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अगुवा थियो तर के अहिले पनि उसको त्यो हैसियत बाँकी छ त?
हिजो संसदमा नाराबाजी भइरहँदा संसदको कामकारवाही हेर्न आएका विद्यार्थीले के बुझे? पक्कै पनि उनीहरुले आफ्ना शिक्षकलाई गलत ठहर्याए। शिक्षकले पक्कै उनीहरुलाई संसदमा विभिन्न विषयमा छलफल हुन्छन्। पक्ष र विपक्षमा तर्क गरिन्छ। सांसदहरुले आफ्नो तर्फबाट संशोधनको लागि सुझाव दिन्छन्।
र, सबैको विचार मन्थनबाट प्राप्त निष्कर्ष कार्यान्वयनमा जान्छ भनेर पढाएका थिए होलान्। तर, जब विद्यार्थीले संसद बैठकमा अराजकता देखे त्यसपछि स्वभाविक रुपमा उनीहरुले शिक्षकलाई नै गलत ठाने। शिक्षकले झुटो पढाएको ठाने। के ती शिक्षक गलत थिए? वा सांसद गलत थिए? प्रतिपक्षी सांसदले आफैं ‘मम’ भनुन्।
पछिल्लो समय कांग्रेस एजेण्डाविहीन भएको छ। कांग्रेसीजनले यसको जतिसुकै प्रतिवाद गरुन् तर कांग्रेससँग अब के गर्ने भन्ने रोडम्याप नभएको साँचो हो। कांग्रेसीजनलाई यो सुन्दा नरमाइलो लाग्ला, मन अमिलो होला तर विगत डेढ वर्षमा कांग्रेसका एजेण्डा तीन महिना पनि टिकेका छैनन्।
आज एउटा एजेण्डा लिएर चर्किएको कांग्रेस ३ महिना नपुग्दै अर्को एजेण्डा लिएर विरोध गर्न थाल्छ। त्यसको तीन महिना नपुग्दै उसको एजेण्डा अर्कै हुन्छ। साउनको मध्य चलिरहेको छ। किसानले बर्खे भेल छोपेर रोपाइँ गरिरहेछन्। र, यता संसद बैठकमा कांग्रेसले पनि त्यही भेल छोपेर नाराबाजी गरिरहेछ।
मानिसको ज्यान सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। कसैको प्राण नै जानु सानोतिनो कुरा मान्न कदापी सकिँदैन। कसैको जीवनको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षले आवाज उठाउनु नाजायज होइन। तर, प्रहरीको तथ्यांक हेरौं त, पछिल्लो एक महिना देशभर कति जनाको अप्राकृतिक रुपमा ज्यान गएको छ? पछिल्लो एक महिनामा कति जनाको हत्या भयो? निश्चित रुपमा सर्लाहीमा मात्र हत्या भएको त होइन। तर, प्रतिपक्ष किन यही विषयमा मात्र चर्काचर्की गरिरहेछ ? पछिल्लो १ वर्षमा बलात्कृत भइ हत्या हुने निर्मला पन्त एकमात्र बालिका होइनन्। तर, किन निर्मला मात्र प्रतिपक्षको एजेण्डा बन्छिन्?
तीतो छ तर सत्य यही हो, प्रतिपक्षलाई न्यायको आडमा आफ्नो प्रभाव पनि देखाउनु छ । त्यसैले त जहिले पनि यस्तै विषय मात्र उसको एजेण्डा बन्छन् जुन विषयले ठूलो चर्चा पाएका छन् । अनकन्टार गाउँमा दबिएर रहेका घटनामा पनि यस्ता अन्याय भएका छन् । न्याय नपाएका अरु पनि छन् । तर, किन भाइरल भएको र ठूलो चर्चा पाएको विषय मात्र एजेण्डा बन्ने ? के सर्लाही घटनाबाहेक अन्यत्रका अन्यायमा परेका नागरिक नेपाली होइनन् । के निर्मलाबाहेक अरु बलात्कृतको आँसु फरक हुन्छ ?
आँसु सबैको एउटै हो, रगत सबैको रातो नै छ र सबै नागरिकलाई राज्यले समान अभिभावकत्व दिनुपर्छ। भाइरल विषयवस्तुलाई चर्काएर संसदमा आफ्नो प्रभाव देखाउनुको सट्टा सभ्य तरिकाले पनि जान सकिन्छ। हिजोको दिनमा गणतन्त्र, संविधानसभा जस्ता एजेण्डा बोकेर हिँड्ने कांग्रेस आज किन चर्चित घटनाका पछाडि मात्रै लागिरहेछ? न्यायसम्पादनको लागि प्रहरी, गृह प्रशासन, न्यायालय छन् । ती निकायलाई चुस्त बनाउने गरी संसदबाट कानुन निर्माण गराउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने काम राजनैतिक दलको हो ।
राज्यका कुनै निकायमा भएको खराबीको लागि सिंगो संसद अवरुद्ध गर्नु राजनैतिक दललाई शोभा दिँदैन । संसदको काम कानुन बनाउने हो न्यायको फैसला गर्ने होइन । संसदबाट कडा कानुन बनाएर लागू गराउन सके हत्या गरिएका एक बालक होइन सबै नागरिकले न्याय पाउँछन् । प्रहरी प्रशानलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने, अपराध अनुसन्धानका लागि पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवथा गर्ने हो भने निर्मला मात्र होइन यसरी अन्यायमा परेका सबै नारीहरुले न्याय पाउँछन्।
संसदले सबै नागरिकले समान न्याय पाउने व्यवस्था गर्ने हो एउटाको मात्र पछि लाग्ने होइन। आज एक बालकलाई न्याय दिलाउन संसद अवरुद्ध भयो । के भोलि अर्को हत्यामा पनि यस्तै गर्ने । हरेक अपराधका लागि संसद अवरुद्ध गर्दै जाने हो भने कहिलेसम्म यो पाराले चल्छ । राजनैतिक दलले संसदबाट न्याय सम्पादन प्रभावकारी रुपमा हुने व्यवस्था गर्ने हो। त्यसका लागि कानुन बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्ने हो । न्याय सम्पादनका लागि त राज्यमा जिम्मेवार निकाय नै छन्।